Mashiinka Shiinaha ee loo yaqaan 'Laryngeal Mask' Airway oo loogu talagalay isticmaalka kaliya ee warshad iyo soo saarayaasha | Kangyuan
2 Way Silicone Foley Kateetarka
2 Way Silicone Foley Catheter oo leh Tiemann Talo
Silikoon Foley Kateetarka oo leh Baaritaanka Heerkulka
Hawada Mareenka Laryngeal for Single Use
Tube Endotracheal oo leh Talo Gaar ah
Tube Caloosha Silicone
Gelitaanka Helitaanka Neefsashada-Faaruqinta ee Isticmaalka Hal Mar
• 100 silic silikoon darajo caafimaad ah oo loogu talagalay isku-xirnaanshaha jir ahaaneed.
• Naqshadaynta non-epiglottis-bar waxay siisaa marin fudud oo cad iyada oo loo marayo lumen.
• 5 sadarro xagal leh ayaa soo muuqanaya marka cabbirka uu ku yaallo xaalad fidsan, taas oo ka fogaan karta in khafiifku uu u xumaado inta la gelinayo.
• Weelka moolka dheer ee kafateerku wuxuu bixiyaa daboolid heer sare ah wuxuuna ka hortagaa xannibaadda ay keento epiglottis ptosis.
• Daaweynta khaaska ah ee dusha sare ee cabbirka waxay yareyneysaa qulqulka oo si wax ku ool ah u beddela
• Ku habboon dadka waaweyn, carruurta iyo dhallaanka.
Xirxirida:5 kumbiyuutarro / sanduuq. 50 kumbiyuutar / kartoon
Cabbirka kartoonka: 60x40x28 cm
Shayga ayaa ku habboon in loo isticmaalo bukaannada u baahan suuxdinta guud iyo dib-u-soo nooleynta xaaladaha degdegga ah, ama in la dhiso hawo-gacmeed dabiici ah oo muddo gaaban aan cayimanayn oo loogu talagalay bukaannada u baahan neefsashada.
Badeecadani iyada oo loo eegayo qaab-dhismeedka waxaa loo qaybin karaa nooc caadi ah, laba nooc la xoojiyay, nooca caadiga ah, laba nooc oo la xoojiyay. Nooca caadiga ah ee tuubbada hawo-qaadashada, xirmooyinka bacda daboolan, tuubbada la buufin karo, ee tilmaamaysa barkinta shilka, bawdada isku dhafan iyo kuwa la buufin karo waxaa xoojiyay tuubada hawo qaadashada, isku xiraha kiishka, tuubada hawada. Tilmaamaha usha hagaha hawada, (ma awoodo), iyo waalka lacag wadaagga ah; laba jibbaar nooca caadiga ah ee tuubbada hawo qaadashada, tuubbada dheecaanka, xirmooyinka bacda daboolan, tuubbada la buufin karo, oo muujinaysa barkinta shilka, bawdada wadajirka ah iyo kuwa la buufin karo; tuubbo laba-geesood ah oo lagu xoojiyay tuubbada hawo-qaadashada, tuubbada dheecaanka, xirmooyinka bacda daboolan, tuubada la buufin karo, tilmaamaysa barkinta shilka, xirmada suufka isku xidha, usha hagaha (maya), wadajirka iyo waalka lacag-bixinta. Ku xooji laba jibaar xoojinta maaskarada laamiga gidaarka gudaha hawo mareenka silig birta birta ah. Si loo xoojiyo tuubada hawo-qaadashada, tuubbada dheecaanka, daboolka isku xidhka bacda, suufka isku xidha, tuubada la buufin karo, bacda hawadu waxay korsataa tilmaamaha laga sameeyay maaddada caagga ah ee silikoonka ah. Haddii sheygu nadiif yahay; garaac Oxygen ethane jeermiska, haraaga maadada ethylene waa inay ka yaraataa 10μg / g.
[Model specification] eeg shaxda hoose ：
Nooca caadiga ah, nooca xoojinta,
Nooca caadiga ah ee leh tuubbo labalaab ah,
Nooca la xoojiyay oo leh tuubbo labalaab ah
Sicir bararka ugu badan (Ml)
Miisaanka bukaanka / culeyska jirka (kg)
Ilmaha6 ~ 10
Caruurta10 ~ 20
Carruurta20 ~ 30
Dadka waaweyn30 ~ 50
Dadka waaweyn 50 ~ 70
Dadka waaweyn 70 ~ 100
Dadka waaweyn ＞ 100
1. LMA, waa inuu ka hubiyaa qeexida calaamadeynta alaabta.
2. Si loo neefsado gaaska ku jira hawo mareenka marinka mareenka laryngeal si uu daboolka gabi ahaanba u siman yahay.
3. mari qadar yar oo cusbada caadiga ah ah ama jel biyo-u-milma si aad u-nadiifisid dhabarka daboolka cunaha.
4. Madaxa bukaanku waxyar ayuu soo noqday, oo suulkiisa bidix uu galay bukaanka afkiisa iyo jajabinta daanka bukaanka, si loo ballaariyo farqiga u dhexeeya afka.
5. Adiga oo adeegsanaya gacanta midig si aad u haysato qalinka haya maaskaro-mareenka, si loo helo, farta farta iyo farta dhexe farta jirka ku xirnaanta daboolka iyo maaskaro qaadista tuubada hawo-qaadashada, afka ku daboolo jihada dhinaca khadka hoose ee daanka hoose. , carrabku ku dheggan yahay 'LMA pharyngeal LMA', illaa iyo inta uusan sii socon ilaa hadda. Sidoo kale way isticmaali kartaa habka gadaal u gelinta maaskaro caarada, kaliya ku daboolo afka dhinaca sare, waxaa afka la saari doonaa ilaa hunguriga salka hoose ee maaskarada cunaha, iyo 180O wareegga ka dib, ka dibna sii wad inaad hoos u riixdo maaskarada cunaha , illaa iyo hadda ma riixi karo. Markaad isticmaaleyso maaskarada laastikada la xoojiyay ama ProSeal ee leh usha hagaha, usha hagaha ayaa la galin karaa godka hawadu si ay u gaarto booska loogu talagalay, iyo galinta lafta maaskaro waa la soo bixin karaa ka dib marka la geliyo maaskarada cunaha.
6. Dhaqdhaqaaqa ka hor gacanta kale si tartiib ah farta u cadaadinaya si looga hortago barokaca hawo mareenka marin haweedka marinka kateetarka.
7. Iyadoo la raacayo qiimaha magacaaban ee lagu daboolayo boorsada ka buuxsantay gaaska (qadarka hawadu kama badnaan karo calaamadda buuxinta ugu badan), isku xira wareegga neefsashada oo qiimee in hawo wanaagsan, sida hawo qaadista ama xannibaadda, ay tahay inay waafaqsan tahay tallaabooyinka dib u gelinta maaskaro laryngeal
8. Si loo xaqiijiyo booska maaskarada laaliska inay sax tahay, dabool suufka iligga, booska go'an, hawo hawo.
9. Daboolka hunguriga ayaa la soo saaray: hawada ka dambeysa waalka hawada ee saliingaha oo leh siliingaha aan irbad lahayn ayaa laga soo saaray daboolka cunaha.
1. Bukaannada ay u badan tahay inay yeeshaan calool buux ama calool buux, ama caado u yeeshay matag iyo bukaanno kale oo u nugul soo noqoshada.
2. Kordhinta aan caadiga ahayn ee bukaanka oo leh dhiig bax ku jira mareenka neefta.
3. Awoodda bukaanka xannibaadda marinka neef mareenka, sida hunguriga oo xanuun, barar, hematoma iwm.
4. Bukaanku kuma haboona isticmaalka sheygan.
1. Kahor isticmaalka waa in lagu saleeyaa da'da, culeyska jirka ee xulashada kaladuwan ee noocyada tilmaamaha saxda ah iyo in la ogaado in boorsadu daatay iyo in kale.
2. Fadlan hubi ka hor intaadan isticmaalin, sida kuwa ku jira hal (baakadaha) alaabada waxay leeyihiin shuruudaha soo socda, mamnuuca isticmaalka:
a) Muddo wax ku ool ah oo ka mid ah jeermiska
b) Badeecada oo dhaawacan ama leh jidh shisheeye.
3. Isticmaalku waa inuu ilaaliyaa dhaqdhaqaaqa bukaanka bukaanka iyo auscultation ee sanqadha neefta labada dhinac si loo go'aamiyo saameynta hawo-qaadashada iyo joojinta kormeerka kaarboonka dioxide ee dhaca. Sida helitaanka wadnaha ama saboolka ama isbeddellada ballaadhan ee is-bedbeddelaya ayaa maqlaya dhawaqa daadanaya, waa in isla markaaba la soo jiido maaskaro caloosha, ka dib marka oksijiin buuxda mar labaad la beero ka dib
4. Hawo-qaadista cadaadiska togan, cadaadiska marin-haweedka waa inuusan ka badnaan 25cmH2O, ama u nugul in dheecaan ama gaas caloosha gasho.
5. Bukaannada leh maaskarada cunaha waa inay sooman yihiin ka hor intaan la isticmaalin, si looga fogaado suurtagalnimada ka-hortagga qulqulka oo ay keento waxyaabaha caloosha ku jira inta lagu jiro hawo-qaadista cadaadiska wanaagsan.
6. Badeecadani waa nadiifinta 'ethylene oxide', jeermiska la joojiyaana waa mid shaqeynaya muddo saddex sano ah.
7. Marka buufinku buuxo, qadarka lacagtu waa inuusan ka badnaan awoodda ugu badan ee lagu qiimeeyo.
8. Badeecadan loogu talagalay isticmaalka daaweynta, hawlgalka iyo adeegsiga shaqaalaha caafimaadka, burburka ka dib.
Alaabooyinka waa in lagu keydiyaa qoyaan aan ka badnayn 80%, heer kulku kama badna 40 darajo Celsius, gaasaska wax daxaya iyo qolka hawo nadiifinta oo wanaagsan.
[Taariikhda soo saarista] Eeg sumadda xirxirida gudaha
[taariikhda dhicitaanka] Eeg sumadda xirxirida gudaha
[Taariikhda daabacaada faahfaahinta ama taariikhda dib u eegista]
Taariikhda daabacaadda faahfaahinta: Sebtember 30, 2016
Soo-saare: HAIYAN KANGYUAN CAAFIMAADKA QALABKA CO., LTD
Hore: Tube Endotracheal oo leh Talo Gaar ah
Xiga: Silikoon Foley Kateetarka oo leh Baaritaanka Heerkulka
Warshadda Airway Mask
soo saaraha hawo-mareenka laryngeal
alaab-qeybiyaha hawo-mareenka laryngeal
warshad maaskarada laryngeal
maaskaro lakab silikoon ah
marinka hawo mareenka silikoon silikoon
soosaaraha hawo-mareenka silikoon silikoon
alaab-qeybiye mareenka silikoon silsilad
warshad maaskaro silikoon silikoon
Maskaxda Laryngeal Reusable Airway
Tube Endotracheal xoojiyay
Maaskaro Suuxdinta La tuuro
Heerka Tube Endotracheal